Ka anyị kpata ego: 8zọ asatọ iji gbanwee okporo ụzọ mgbasa ozi ọhaneze na ire ahịa | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ọhụụ ọhụrụ maka ndị ọkachamara n'ahịa n'ụwa niile. N'adịghị ka nkwenkwe oge ochie, ahịa mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịba uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla - ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ puku afọ ma ọ bụ ọgbọ X, ndị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị nwe nnukwu azụmaahịa, ndị na-edozi ma ọ bụ ndị prọfesọ kọleji. Tụle eziokwu na e nwere banyere 3 ijeri ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ị nwere ike ikwu na ọ nweghị ndị ga-achọ ịzụta ngwaahịa gị n'etiti ha? Ọrụ gị bụ ịchọta ndị a.
N'iji ya tụnyere ahịa ọdịnala, ahịa mgbasa ozi ọha na eze nwere ọtụtụ uru - ọwa a nke nkwukọrịta dịtụ ọnụ ala ma bụrụ nke a na-ahụta dị ka nke ezigbo na ntụkwasị obi, nke na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke maka ntụgharị. Ikwesighi iwere okwu m maka ya - lee anya ole ụlọ ọrụ na-emefu na mgbasa ozi mgbasa ozi. Yabụ kedu otu esi eji usoro mgbasa ozi iji nweta uru?
Nyochaa usoro ire ere gị
Nnyocha bụ Holy Grail nke ahịa - ị gaghị ere ihe ọ bụla na-enweghị nghọta miri emi banyere onye ga-achọ ịzụta ngwaahịa gị na-eme ma na-eme mkpebi. Ọ bụ ya mere, nke mbụ, ị kwesịrị iji nyochaa usoro ire ahịa n'azụ ụlọ ahịa gị.
Ajụjụ ndị ị kwesịrị ịjụ onwe gị iji nyochaa ohere ịzụ ahịa mgbasa ozi gị bụ:
nke ọwa na-ewetara ndị ndu gị ugbu a?
Gịnị bụ usoro ire ere?
Ego ole oge ọ na-ewe iji mechie nkwekọrịta ahụ?
Azịza nye ajụjụ ndị a nwere ike iju gị anya: ikekwe ị ga-achọpụta na ị na-elekwasị anya na nyiwe na-ezighi ezi n'oge niile. N'okwu a, ịnwere ike ịchọpụta na ọ bara uru ịme obere nyocha raara onwe gị nye ịhọrọ usoro mgbasa ozi mmekọrịta kacha mma maka azụmaahịa gị.
Nwere ike ime ya site na ịgbaso ọrụ mgbasa ozi nke ndị na-asọmpi gị na ịhụ ụdị nyiwe kachasị baa uru maka ha, mana enwere ụzọ dị irè karị ma maa mma iji mee ya. Niile ị chọrọ bụ a na-elekọta mmadụ na-ege ntị ngwá ọrụ dị ka Awario. Na ya ị nwere ike inyocha aha nke isiokwu ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta na webụ na ozugbo.
Ka anyị kwuo na ị na-eme SaaS maka mmalite - ị na-etinye “mbido” dị ka otu n’ime isiokwu gị wee hụ ụdị nyiwe ndị ọzọ kwuru banyere ya, yabụ, mkparịta ụka ndị ọzọ metụtara ngwaahịa gị. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịghọta ebe ndị ị na-ege ntị lekwasịrị anya ma dozie ọwa dị mkpa.
Buru n'uche na na mgbasa ozi mgbasa ozi ị na-abịarute ndị na-azụ ahịa na mbụ na usoro ahịa ahụ: ugbu a, e kewara ọkwa ọkwa nke atọ (ikpughe, mmetụta na njikọ aka) Nke ahụ pụtara na ị ga-achọ ịkpụzi usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Nyochaa ma gbaa Social Media Nyocha
Oge mgbasa ozi ọdịnala na-abịa na njedebe - mgbasa ozi mgbasa ozi eweghachila ụzọ kachasị dị irè isi metụta omume ịzụ mmadụ. Na-eche ihe ọ bụ? O bu okwu onu. N'ezie, dị ka Nielsen, 92% nke ndị mmadụ ntụkwasị obi na-atụ aro site n'aka ndị enyi na ezinụlọ gị n'ụdị ahịa ndị ọzọ niile, na 77% nke ndi ahia O yikarịrị ka ị ga-azụta ngwaahịa ọhụrụ mgbe ị na-amụ banyere ya site na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ. Ọ bụ ihe dị adị ma ị họrọ ịtụkwasị ndị ị maara obi karịa akara.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ebe zuru oke maka ịkọwapụta ahịa: a haziri nyiwe niile a ka anyị soro ndị enyi anyị kerịta ahụmịhe na nchọpụta dị ịtụnanya. Yabụ ihe ị ga - eme iji nweta ego na ya bụ ịgba ndị mmadụ ume ka ha biputere ahụmịhe ha. I nwedịrị ike ịnye ha obere ihe mkpali, dị ka obere ego ma ọ bụ ihe nlele.
Echefula ịzaghachi nyocha niile, nke ọma na nke ọjọọ. 71% nke ndi ahia ndị nwere ezigbo ahụmịhe ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ha na akara nwere ike ịkwado ya ndị ọzọ. Ọrụ mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike site na ika ahụ na-emepụta mmekọrịta n'etiti akara na onye ahịa ma mee ka ha nụ, nke dị ezigbo mkpa maka njigide.
Were na-ere Social
Ọbụghị naanị ndị mmadụ na-enwe ike ịkekọrịta echiche ha gbasara ụdị na soshal midia, ha na-agakarị na mgbasa ozi mmekọrịta iji nweta aro. N'ebe ahụ, ị ​​nweelarị ụzọ - ị ga - amata ha. Nwere ike ịchọta ha site na nlekota obodo dị mkpa dị ka otu Facebook, subreddits, Twitter chats ect. I nwekwara ike iji ngwa mmadụ na-ege ntị maka nke ahụ, mana gbaa mbọ hụ na o nwere ihe dịka Boolean ọnọdụ ọchụchọ, nke na-enye gị ohere ịhazigharị ajụjụ gị ka ị nwee ike ime ka nyocha gị zie ezie ma zuo ezuo n'otu oge ahụ.
Tụle eziokwu ahụ bụ na n'ọtụtụ oge, ị ga-aza ndị bịara abịa nke na-ekpughereghị ika gị tupu oge a. Abanyela n’ime ya site n’inwe ire ere n’enweghi mmetụta - jụọ ajụjụ, kọwaa otu ha ga-esi rite uru na ngwa ahịa gị, jiri ụda na olu dabara adaba n’elu ikpo okwu na arịrịọ ha, ma mee ka mmekọrịta a nwee isi na eziokwu. Zọ a yikarịrị ka ị ga-emetụta mkpebi ha karịa izipu ozi kuki na cutter na ndu ọ bụla ị ga-ahụ. Na n'ezie, mee ka ọ dịrị ha mfe ịzụta - nye ha njikọ, nke na-eduga na ngwaahịa ahụ.
Na-ebuli ụzọ Mediazọ Mgbasa Social gị ka ị gbanwee
Na-ekwu maka njikọ, ha dị oke mkpa. Anyị bụ ndị umengwụ ndị ahịa na-achọkarị ịgwa anyị otu esi azụ ngwaahịa ịchọrọ. Ọ bụrụ na onye ahịa nwere ike ịpị pịa njikọ na weebụsaịtị gị ozugbo, ọ ga-abụ na ọ gaghị egbochi ha ịchọ ya.
Ihe ị kwesịrị ime bụ itinye njikọ na nke ọ bụla n’ime profaịlụ gị ma mee ka ọ pụta ìhè. Ọ bụrụ na ị na-eziga ọkwa nkwado - tinye njikọ ebe ahụ, ọ bụrụ na ị na-ekwu banyere otu n'ime ngwaahịa gị n'echebaraghị echiche - tinye njikọ ebe ahụ. Ọbụna mgbe ị na-aza ndị na-ezo aka, nke anyị tụlere na mbụ, ị nwere ike itinye njikọ na ngwaahịa a na-atụle.
Ikwesiri ime ka uzo nke ntughari di ka o kwere mee.
Gụgharịa ihu gị Social Media ọdịda
Mgbe ị nwetara ụzọ, ịchọrọ ijide n'aka na ha dị otu pịapụ na ntụgharị. Ọ ga-abụ ihe nwute imepụta usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta dị ịtụnanya naanị ka ịkwụsị usoro ire ahịa n'oge ikpeazụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji chọọ peeji ọdịda zuru oke nke ga-eme ka onye ahịa gị kwenye ịme mkpebi ịzụta ihe. Ndị a bụ ihe ole na ole ịkwesịrị iburu n'uche ka ị gụgharịa peeji ọdịda gị:
Na-agba ọsọ ọsọ. Ndị ahịa abụghị naanị umengwụ, ha anaghị enwe ndidi (ndo, ndị ahịa!). Ha na-atụ anya ka ibe gị banye na ya 3 sekọnd, ebe oge itinye oge dị afọ 15. Ya mere, jide n'aka na ha agaghị echere!
Obere ma dị mfe. Enweghị mkpa ịdepụta otu ihe kpatara ngwaahịa gị ji dị mma na nkọwapụta ọ bụla. Ouchọghị ịdọpụ onye ahịa gị na ozi ndị ọzọ niile. Mee ka ozi ahụ kwughachi uru gị dị mfe ma dị ọcha ma tinye ozi ndị ọzọ na taabụ dị iche iche dị mfe iji achọpụta - ọ bụ ya.
Ọzọkwa, nkwenye na ndughari Iji mezue ntughari ị chọrọ ntụkwasị obi ndị ahịa. Nkwenye dị oke mkpa maka mkpebi onye zụrụ ahịa. Jide n'aka na ị nwere akara ngosi gị ma ọ bụ akaebe nke onye ahịa gị na anya gị n'otu akụkụ ma ọ bụ na nkụnye eji isi mee - ebe ha nwere ike ịhụ ya ngwa ngwa na-enweghị mpịgharị.
Mee ngbanwe dị nro
Dị ka anyị kwurula, ndị na-elekọta mmadụ na-eduga n'olulu ahịa tupu ụzọ ọdịnala. Maka nke ahụ, ha nwere ike ha agaghị adị njikere ịme mkpebi ịzụta, mana nke ahụ apụtaghị na ị nwere ike ileghara ha anya.
N'ebe a ị nwere ike ịmepụta ohere maka ntụgharị ntụgharị dị nro. Classiczọ kachasị mma iji mee ya bụ ịnye ndenye aha email. N'ezie, ị kwesịrị ịkọwa nke a n'aka ndị ahịa site na ịnye ha obi ụtọ na ọdịnaya bara uru. Contentme ọdịnaya na-egosi na otu ngwaahịa gị si arụ ọrụ (nkuzi na ọmụmụ ihe) bụ ụzọ dị mma iji gbanwee ndị a dị nro gaa ndị na-azụ ahịa.
Omume ohuru ohuru ugbu a bu ozi ozi, ya mere, kama ịjụ ndị mmadụ ka ha denye aha gị n'akwụkwọ ozi gị, ị nwere ike ịrịọ maka ikike izigara ha ozi. E gosiputala na ndị mmadụ nwere ike ịgụ ozi na mgbasa ozi karịa ka email. Nnyocha na-egosi na ngwa izipu ozi nwere ọnụego emeghe, gụọ ọnụọgụ na CTRs dịka 10X nke email na SMS. Ọzọkwa, ị rutere ha kpọmkwem ebe mbụ ha hụrụ akara gị - na mgbasa ozi mmekọrịta.
Gụnye Oku Na-eme Omume siri ike
Ọ bụrụ na ịjụghị ihe ọ bụla - ị gaghị enweta ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị ka ịkpọ oku na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ ghara ịdị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụ ụzọ dị irè ma ọ bụrụ na ị mee ya.
CTA gi kwesiri ka o doo anya ma dikwa nma na post - uzo a o gha adi nma na ihe kwesiri. O nwere ike ịbụ òkù ịhapụ ikwu okwu ma kọọrọ ha echiche ha, mụtakwuo banyere isiokwu ahụ ma ọ bụ agbamume ịzụta ngwaahịa gị. Gbakwunye CTA na ibe Facebook gị nwere ike ịbawanye pịa-site na ọnụego site 285%. Echefula iji jide n'aka na ọ bụrụ na ị gụnyere njikọ ọ bụla, enwere ike iwebata peeji ọdịda gị maka ntụgharị ozugbo.
Nye Social Exclusives
A sị ka e kwuwe, ụzọ kachasị mma iji nweta ndị ahịa ọhụrụ bụ ịnye ihe naanị na nloghachi - ndị mmadụ nwere mmetụta na-adị ka ha bụ akụkụ nke otu a họọrọ. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịnye ndị na-eso ụzọ gị ego - ị nwere ike ịgaghị eme ya oge niile, mana dịka nkwekọrịta otu oge iji dọta ọhụụ na-eduga na ọ bụ anwansi.
Morezọ imepụta ihe (ma dị ọnụ ala karịa) ga-abụ ịsọmpi n'etiti ụmụazụ gị. Dị ka ọmụmaatụ, Onyeka Onwenu enwe ike ime ka ọnụnọ ha na-enwe mmekọrịta site na 300% wee mepụta ndepụta email ha okpukpu abụọ na-erughị otu izu site na iji asọmpi ịntanetị echebara echiche nke ọma. Nwere ike ịjụ ndị na-eso ụzọ gị ka ha kesaa ma degharịa post gị ma ọ bụ mepụta ọdịnaya nke ha na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na ya. You're na-egbu nnụnụ abụọ na-eji otu okwute - ị na-ekpughere ndị ọzọ na ndị na-eso ụzọ yana ị na-achịkọta ọdịnaya onye ọrụ ị nwere ike iji ma na mgbasa ozi mgbasa ozi gị na mgbasa ozi ahịa ọdịnala n'ọdịnihu.
Tags: afụ ọnụnyocha booleanọnọdụ ọchụchọ booleanụzọ ntụgharịOtu Facebooknjikọ nnyemaakaozi oziegoikwu okwu na-elekọta mmadụelekọta mmadụ mediaibe mgbo mgbasa ozi gbadaramgbasa ozi mgbasa ozi na ntughariego mgbasa ozi na-elekọta mmadụmgbasa ozi mgbasa ozina-elekọta mmadụ na-erentụgharị dị nronkwenyeakparịta ụka twitter